Xildhibaano ka tirsan Golayaasha Somaliland oo eedayn dusha uga tuuray Axmed Siilaanyo - Horseed Media
Xildhibaano ka tirsan Golayaasha Somaliland oo eedayn dusha uga tuuray Axmed Siilaanyo November 4, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleXildhibaanada kasoo jeeda gobalada Awdal iyo Salal ee ka tirsan Golayaasha Guurtida iyo Wakiilada ee maamulka Soomaaliland ayaa shir jaraa’iid ay ku qabteen maanta Hargeysa eedayn dusha uga tuuray Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Siilaanyo.
Xildhibaanadan ayaa sheegay in dadka kasoo jeeda gobalada Awdal iyo Salal si joogto ah xilalka looga qaadayey tan iyo intii xukuumada Siilaanyo la wareegtay maamulka, waxayna sheegeen in gobalada Awdal iyo Salal aysan heli gebi ahaan qeybtii ay dowlada ku lahaayeen iyo waliba mashaariicda horumarinta.
Xildhibaanada goobta ka hadlay oo uu kamid ahaa xildhibaan Axmed Yassiin Shiikh Cali ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan gobalada Awdal iyo Salal ay ahaayeen kuwii horseedka u ahaa aasaaska Soomaaliland, maantana aysan xaqii ay ku lahaayeen Soomaaliland aysan ku heysan, wuxuuna sheegay in marar badan ay cabashadan gaarsiiyeen Madaxweyne Axmed Siilaanayo, balse uu kasoo jawaabi waayey taasina keentay in ay arrimaha Saxaafadda iyo Caalamka usoo bandhigaan.
Xildhibaanada halkaasi ka hadlay ayaa sidoo kale sheegay in Amar Madaxweyne shaqada looga fadhiisiyey dhamaan Agaasimiyaashii ay Gobaladan ku lahaayeen maamulka Soomaaliland.
Dhanka horumarinta ayey sheegeen Xildhibaanadan inaysan wax la taaban karo oo mashaariic horumarin ah laga sameen gobalada Awdal iyo Salal. Xildhibaan Cali Shiikh Ibraahim Aareey oo kamid ahaa Xildhibaanadii madasha ka hadlay ayaa tusaale usoo qaatay Mashaariicdii Biyaha ee Soomaliland loogu talo galay oo ay ku baxeysay dhaqaale gaaraya 27 Million oo dollar in labadaasi gobal aan lasoo gaarsiin, halka mashaariicdaasi laga fuliyey dhamaan gobalada kale ee kamid ah Soomaaliland.
Xildhibaanadan ayaa sidoo kale si weyn u saluugay Wasiirada gobalada Awdal iyo Salal laga siiyey Xukuumada Soomaaliland, ayagoo sheegay in hal wasiir oo marna uu ahaa midka Boosta iyo Isgaadhsiinta, marna Sportiga ay yihiin kuwo aan u qalmin gobaladaasi.